एमसीसीको यतिधेरै विरोध किन ? के हो एमसीसी (भिडियो रिपोर्टसहित) - Himalaya Television
एमसीसीको यतिधेरै विरोध किन ? के हो एमसीसी (भिडियो रिपोर्टसहित)
२०७८ भदौ २१ गते २०:४८
२१ भदौ २०७८ काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयताका गतिविधिले सरकार अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्न लागि परेको जस्तो देखिन्छ । एमसीसी पारितका लागि सरकारको सक्रियता बढ्दै जाँदा यसबारेको बहस पनि बढ्न थालेको छ ।